ရွှေတွံတေးဆရာတော် ရခိုင်ဒုက္ခသည်များအတွက် အထူးတရားပွဲကျင်းပ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင်များကြောင့် အိုးအိမ်မဲ့စားစရာမဲ့ဖြစ်ကြရသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားများစုပေါင်းပြီး ရွှေတွံတေးဆရာတော် အထူးတရားပွဲကို ”စမွတ်စခွန် ခဲလိုင်ရပ် အောပေါသော” ကစားကွင်း တွင် ၂. ၁၂. ၂၀၁၂ နေ့ က ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
ဓမ္မပူဇာအလှူငွေ ဘတ် ၃သောင်းကျော်ကို Raksthai နှင့် ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်တော် များမှတဆင့်အကျိုးဆောင်များက လှူဒါန်းပေးပို့ 
မည်ဖြစ်ပြီး ဘတ် ၂သောင်းကျော်ကို ရွှေတွံတေးဆရာတော် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လှူဒါန်းပါမည်။
ရွှေတွံတေးဆရာတော်က. “တိုင်းရင်းသားများအားလုံး ဘာသာစုံ လူမျိုးစုံ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်ကြဖို့– အစွန်းရောက်အကြမ်း ဖက်သ မားများကို ညီညီညွတ်ညွတ် စုပေါင်းရင်ဆိုင်ကြဖို့– အာဏာပိုင် အကြီးအကဲများလည်း မှန်မှန်ကန်ကန် သစ္စာရှိရှိ တိုင်းပြည်နဲ့ လူ မျိုးကို စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် မဖောက်ပြန်ကြဖို့– နိုင်ငံတာကာမှာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုဘန်းပြနေသူများလဲ လူ့အခွင့် အရေး လိုချင်ရင် လူ့စည်းကမ်းကိုလေးစားကြဖို” …… စသဖြင့်မိန့် ကြားခဲ့သည်။
ယခုလည်း တတ်နိုင်သလောက်ပံ့ပိုးခြင်းသာဖြစ်ပြီးစိတ်ဓါတ်အင်အားရှိစေဖို့ တသားတည်းရှိနေကြကြောင်း အဓိကပြသကြိုးစားခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။